BNGRC : Manavao sahady ny paikady sy drafitra hiatrehana ny hamehana
Atao ao amin’ny les roches rouges ny atrikasa fanavaozana sy fanatsarana ny paikady sy drafitra entina hiatrehana ny hamehana. 9 novembre 2017
Tsy ny loza voajanahary ihany fa ny loza rehetra no tafiditra amin’io hamehana io ka nasaina nanatrika izany ny Lehiben’ny Faritra, ny sefo distrika, ny ben’ny tanàna ary ireo lehibe sy mpitantana ireo sampan-draharaham-panjakana isan-karazany. Ny jeneraly Rambolarson Charles no nitarika izany ary haharitra telo andro.
Vao nivoaka ny valanaretina pesta isika teo ary hiatrika sahady koa ny asara sy ny fotoanan’ny rivo-doza ka ilaina io fanavaozana io, izay efa atao hatrany isan-taona. Na izany aza dia mbola tsy mahafa-po ny olom-pirenena amin’ny ankapobeny ny fiasan’ny birao nasionaly hoentina hitantanana ny loza sy ny tandindonin-doza raha tsy hiresaka afa-tsy ny valanaretina pesta nisy teto, na koa ireo tondra-drano tamin’ny voalohandohan’ny taona.
Ilaina araka izany ny fanavaozana sy fanatsarana ireny paikady sy drafitra ireny mba tena hifanaraka tsara amin’ny zava-misy sy hamaly tsara ny filan’ny mponina sy hanampy azy ireo rehefa tena tonga ny loza.